आज नेपाल आईडलबाट बाहिरिने पालो कस्को ?
काठमाडौं/ पछिल्लो समय निकै नै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको रियालिटी टेलिभिजन सो नेपाल आइडलबाट शुक्रबार एक जना बाहिरिने छन् । निकै नै राेचक र प्रतिष्पर्धात्मक बन्दै गएकाे नेपाल अाइडलमा अाज कसले रुवाउने हाे त्याे भने दर्शककै हातमा रहेको छ ।
विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अहिले नेपाल आइडलमा पाँच जना प्रतिष्पर्धी बाँकी रहेका छन् । मोरङका निशान भट्टराई, नारायणगढ, चितवनका सागर आले, रुपन्देहीकी सुजाता पाण्डेय, पोखराका बुद्ध लामा तथा ललितपुरका प्रताप दासमध्ये शुक्रबार एक जना बाहिरिने भएका छन् ।
दर्शकको भोट नै निर्णायक भएकाले को बाहिरिन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । यद्यपी सामाजिक सञ्जालमा भने अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ । सबै प्रतियोगीका प्रस्तुतिले दर्शक र निर्णायकको मन जित्न सफल भएको छ ।
यस अघि नै बाहिरिएका प्रतियोगी सुरज थापाले सबैलाई रुवाएर गए । झलकमान गन्धर्वको गीत ‘हे बरै’ मा उनले दमदार प्रस्तुति दिएका थिए । गत हप्ता उनी बाहिरिने दिनमा पनि निर्णायक मण्डलकी सदस्य इन्दिरा जोशी, अन्य प्रतिष्पर्धी र दर्शकसमेत रोएका थिए ।
त्यस्तै, पहिले नै बाहिरिएका प्रताप लामा, मेनुका पौडेल, अफसर अली, प्रमिला राई, उल्सन श्रेष्ठ, केञ्जल मेहर श्रेष्ठलगायतका प्रतियोगीको प्रस्तुति दर्शकले निकै नै मन पराएका थिए । नेपाल आइडलको ग्रान्ड फिनाले भने कतारमा हुने भएको छ ।
तामाङ चलचित्र ‘रुङशी टीला’ को शुभमुहुर्त
तामाङ चलचित्र ‘रुङशी टीला’ को शुभमुहुर्त...
जर्नलिज्म ड्रामा ‘साढे ७’ को दोस्रो अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक
चकित पार्ने फिल्म ‘पद्मावत’
भारतमा नरुचाइएको आमिरको सेक्रेट सुपरस्टार चीनमा किन रुचाइयो ?
आज हेटौंडामा ‘म्युजिकल नाइट’ कार्यक्रम हुदै
चर्चा बटुल्दै ‘रुपै मोहनी’